कसरी हुन्छ कोरोना भाइरसको परीक्षण ? - Deshko News Deshko News कसरी हुन्छ कोरोना भाइरसको परीक्षण ? - Deshko News
कसरी हुन्छ कोरोना भाइरसको परीक्षण ?
विश्वका धेरै देशले कोरोना भाइरसको परीक्षणका लागि ‘रियल टाइम पोलिमेरेज चेन रिएक्सन’ ९पिसिआर०को प्रयोग गरेका छन् । भाइरस पत्ता लगाउने पोलिमेरेज चेन रिएक्सन विधि सन् १९८० पत्ता लागेको थियो ।
आपराधिक क्रियाकलापमा संलग्न व्यक्तिको डिएनए पत्ता लगाउनदेखि फलफूलमा भाइरस रहे–नरहेको हेर्नसमेत यो विधि अपनाइन्छ ।
सार्स एवं मेर्सको अनुभव भएका ल्यान्डल यस किटले काम गर्छ वा गर्दैन भन्नेमा ढुक्क भने थिएनन् । तर, किटले काम गर्यो र जनवरी १७ मा उक्त किट बनाउने ढाँचालाई विश्व स्वास्थ्य संगठनले प्रकाशित गरेको थियो ।
त्यस्तै हङकङका प्रोफेसर डा। लियो पुन लिट म्यानको टिमले पनि परीक्षण किट बनाएर १६ डिसेम्बरमै विश्व स्वास्थ्य संगठनमा पठाएको थियो । पुनको टिमले ४० भन्दा बढी देशमा निःशुल्क रूपमा परीक्षण किट उपलब्ध गराएको छ ।
जे होस्, कोरोना भाइरसको संक्रमण न्यून गर्न ठूलो मात्रामा परीक्षण हुन आवश्यक छ, त्यसका लागि थुप्रै कम्पनीहरूले परीक्षण किटको विकास गरिरहेका छन् । एजेन्सी
भोलिदेखि विराटनगरमा पनि कोरोना परीक्षण
विराटनगर, चैत २७ प्रदेश १ सरकारको निरन्तरको पहलको परिणामस्वरुप अब विराटनगरबाट पनि कोरोना परीक्षण हुने